Ma waxaad tahay qof dhab ah oo Hinduism ah? Raadinta meel diimeed oo qiimo leh kuugu imanaysa inta aad ku nooshahay, wax ku dar Jagannath Rath Yatra 2019 liiskaaga! Waa hagaag, Puri Rath Yatra waa runtii wax lagu barto ugu yaraan hal mar noloshooda.
SandPebbles waxay bixisaa baakado aad u fiican Jagannath Rath Yatra si aad u hesho safar aan xor ah lahayn iyo degaan inta lagu jiro saacadaha ugu culus ee magaalada. Haddii aad rabtid inaad ka safartid Bhubaneswar ama aad joogto magaalada inta lagu guda jiro Puri Rath Yatra, waxaynu diyaarinnaa dhammaan diyaarinta ballamooyinka hudheelka si aad u raacdid, safar, iyo dhamaanba, si aad u marto safarkaaga rabbaaniga ah. Our Jagannath Rath Yatra 2019 waxaa ka mid ah:
Maalinta 1: Booqashada Bhubaneswar
Mid ka mid ah wakiilkeena ayaa ku qaabilaya Garoonka Caalamiga ah ee Biju Patnaik, Bhubaneswar oo ku martiqaado Hoteelka. Haddii duulimaadku yimaado subaxdii, waxaad booqan kartaa Smart City ama waxaad ka bixi kartaa Puri, waa 60 Km oo kaliya magaalada. Cunto ayaa la geyn doonaa hoteelka.
Maalinta 2: Booqo Xarunta Jagannat
Kadib quraac kadibna wuxuu u jeedaa Puri marin habaabin iyo midab leh. Booqashooyinka ugu badan ee booqda Dhauli, Ashokan Rock Edict iyo Shanti Stupa, Pipili, oo ah Applique Work Village, Sakhigopal, oo ah Radha Krishna Temple & Raghurajpur, Village Painting. Kadib markii uu yimid Puri, ka hubso hoteelka. Soo dhaweynta booqashada Lord Jagannath Temple si looga qaybgalo Aalati Darshan. Ka dib markaa, dib ugu noqo qolka huteelka si aad u hesho casho iyo habeenkii.
Maalinta 3: Rath Yatra
Ka dib quraacda waxay u gudbaan Puri Badadanda. Qorshe gaar ah ayaa lagu samayn lahaa hudheelka hudheelka si loogu daawado Rath Yatra. Haddii aad rabto inaad Rath Yatra ka aragto qulqulka, fadlan sii wado subaxa hore. Fadlan ogsoonow in baakadaha quraacda, dhalada, weelka qadada la siin doono. Fiidkii waxaad ku noqon doontaa Hotel si aad u hesho casho iyo hurdo nasasho.
Maalinta 4: Cilmi-baarista Puri
Quraac ka dib, u diyaari si aad u aragto indhaha. Booqo Narendra Pokhari, Temple Lokanath, Temple Markandeshwar, Lakshmi Temple, Temple Ganesh, Gundicha Temple, Swargadwar, Raghurajpur Village Artist, Temple Bimala & waxyaabo kale oo badan. U soo celi hudheelka si aad u hesho casho iyo hurdo fiican habeenkii.
Maalinta 5: Madadaalada Puri
Waxaad ku raaxeysan doontaa xeebta. Meelo loogu talagalay dadka xajka badan, kuwaas oo u yimaada qaadashada dhaq-dhaqashada dhaqameed. Mid ka mid ah xeebaha ugu qurxan ee Hindiya, halkaas oo biyaha bata ee Bay of Bengal ay ku bixiyaan qadarka quruxdooda. Waxaad ku raaxeysan kartaa hirarka qaboobaha ah ee ku yaala dhinaca hore ee xeebta oo leh maadada barafka iyo walxaha kale ee cuntada ama tago wadada dheer ee wadada Puri-Konark Marine Drive.
Maalinta 6: Dukaamaysiga Puri
Ku duub ilaa inta wadnahaagu dhibco. Midna kama maqnaan karo farshaxanka laga helo Puri. Raadi quraar dahab ah oo dahab ah, sidoo kale waxaad soo iibsataa Sambalpuri iyo Bomkai gacmahoodu waxay kugula wareegi doonaan shaqo adag.
Maalinta 7: U kaxee Konark
U diyaarso Konark, oo ku riyaaqaya aragti qurux badan oo ka mid ah Puri-Konark Marine Drive. Marka laga reebo ka qayb galka Bandhigga Ratha Yatra, safarada safarka ah ee Puri waxay raadin karaan qaar ka mid ah fursadaha dalxiis ee kale. Puri Beach, Konark Beach, Konark Sun Sun Temple waa qaar ka mid ah meelaha soo jiidashada ugu qurxoon ee ku yaala Puri. Ka dib quraacda booqo Konark Sun Temple, Madxafka ASIl (Xiritaan Jimce), Ramchandi Temple & Chandrabhaga Beach. Galabnimadii, ku raaxee naftaada xeebta dahabka ah kuna raaxeyso suuqa xeebta ee Puri. Waxaad joogi doontaa guriga habeenkii ee Puri.
Maalinta 8: Ka bax
Kadib quraacda, waxaa laguu wareejin doonaa Madaarka Bhubaneswar ama saldhigga tareenka ee socdaalka.
Aarti Tikka markii ay timaaddo
Guryaha Star Hotels
Casho iyo Quraac
Dhammaan kala iibsiyada baabuurta gaarka ah ee AC
Booqashada Puri-Konark Marine Drive (Kursiga baabuurta raaxada ama macalimiinta)
Puri Rukumo xiiso + Jagannath Temple + Konark (Kursiga baabuurta raaxada ama macalimiinta)
Haddii aad ka wada hadashid macbadyada taariikhiga ah, dabaqyada, meelaha duurjoogta ah, dabbaaldegyada, degaannada quruxda badan, dhaqanka ama cuisine - deeqda dawlad-goboleedku waa mid aan dhammaystirnayn. Iyo, dhaqanka Jagannad wuxuu leeyahay wax, taas oo Hindiya kasta ku faani.
Ku soo dhowow dalkii Ilaah. Odisha oo sugaya imaanshahaaga.